Sidee Loo Dhiiri Galiyaa Telegram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo dhejiyaa Telegram?
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 364
Isticmaalayaasha barnaamijka Telegram-ka hadda waxay ikhtiyaar u leeyihiin awoodo inuu muujiyo erey ama weedh kasta waxay rabaan sheekadooda. Barxadku wuxuu bixiyaa beddelka isticmaalka geesinimada iyo muujinta qoraalkaas oo aan dooneyno inaan la wadaagno xiriiradayada
Baro sida loo dhigo geesinimada Telegram Runtii way fududahay, oo barnaamijka laftiisu wuxuu na siinayaa qalabka aan ugu baahanahay inaan ku fulino ficilka noocan ah. Nala joog oo soo hel waxa ay yihiin siyaabaha kala duwan ee ay isticmaaleyaashu u dhigaan geesinimo iyo muujinta weedho Telegram
Siyaabo kala duwan oo geesinimo loogu dhejiyo Telegram
Ma qof ayaad kula sheekaysanaysaa Telegram oo aad dooneysaa inaad erey ama weedh gaar ah iftiimiso? Hadda waa suurtagal in loo mahadceliyo aaladda geesinimada leh ee codsigu bilaabay si layaab leh dhammaan isticmaaleyaasheeda.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo geesinimo loogu dhejiyo Telegram, iyo warka wanaagsan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad khabiir ku ahaato mowduuca si loo gaaro hadafka. Kaliya adoo raacaya tillaabooyin yar oo fudud waxaad awoodi doontaa inaad iftiimiso weedho ama ereyo ku jira sheekaysigaaga.
App wuxuu bixiyaa saddex habab oo kala duwan loogu talagalay adeegsadayaasha doonaya inay ku adeegsadaan geesinimada qoraallada ay soo direen:
Via @bold sida bot a Telegram
Adoo adeegsanaya liiska ee dalabka
Adeegsiga furayaasha qaarkood gaar ah
Ku dhiirrigeliso @bold
Waxaa jira qaab fudud oo geesinimo loogu dhejiyo Telegram iyo amarka @Bold, miyaadan aqoon sida loo sameeyo? Ha walwelin, halkan waxaan kuugu sharaxeynaa:
Furan barnaamijka Telegram
Xullo xiriiriyaha aad rabto inaad u dirto farriinta (haddii ay koox yihiin uun wadahadalka fur)
Sanduuqa farriinta waa inaad qor erayga "@bold" bilowga ka dibna qor macluumaadka aad dirto.
Diyaarso. Wax kasta oo aad qortay waxay u muuqan doonaan si geesinimo leh. Hadda waa inaad riixdo "dir"
Doorashadani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, gaar ahaan kuwa isticmaala ee doonaya inay soo diraan qoraal dhammaystiran oo geesinimo leh. Laakiin haddii aad rabto inaad muujiso weedh ama erey gaar ah, waa inaad isticmaashaa qaab kale.
Iyada oo loo marayo koodhka
Haddii waxa aad rabto ay tahay in la muujiyo weedh ama erey gaar ah markaa waxaad isku dayi kartaa habka soo socda. Codsiga wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka isticmaalka astaamo taxane ah kahor iyo kadib qoraalka aan soo bandhigi doonno, aad ugu eg waxa ku dhacaya WhatsApp.
Ku hel naftaada sheekada si loo qoro fariinta
Riix sanduuqa farriinta in la bilaabo qorista
Miyaad horeba u haysaa farriinta aad dirayso oo diyaar ah? Haatan hadda uun dhig laba xiddigood ka hor iyo laba xiddigood kadib ereyga ama weedha aad rabto inaad geesinimo ka dhigto.
Diyaarso. Hada waad diri kartaa fariintaada
U adeegso menu-ga Telegram-ka si aad u dhiirran tahay
Waxaad haysataa ikhtiyaarkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sida loo dhigo geesinimada Telegram waana isticmaalista miiska ku dhex jira gudaha madal. Waxaad ku sameyn kartaa sida soo socota:
Ku saabsan isaga sanduuqa farriinta, qor waxaad rabto inaad dirto
Miyaad horeyba u diyaarisay fariinta? Hagaag hada waa inaad dhagsii jumlada aad rabto inaad geesinimo ka dhigato oo xulo.
Fursado cusub ayaa soo muuqan doona. Waa inaad gujisaa saddexda dhibcood ee ku yaal dhinaca midigta.
Guji "Caano", waana diyaar.
1 Siyaabo kala duwan oo geesinimo loogu dhejiyo Telegram
2 Ku dhiirrigeliso @bold
3 Iyada oo loo marayo koodhka
4 U adeegso menu-ga Telegram-ka si aad u dhiirran tahay
Waxaan rabaa in aan video ka soo dejiyo Facebook, sideen u soo degsan karaa?
Sidee looga soo degsadaa gisfs-ka twitter-ka?